नेपालगन्ज आउँदा छुटाउनै नहुने खानाका परिकार (भिडियो र तस्वीर सहित) - Nepalgunj Business
नेपालगन्ज आउँदा छुटाउनै नहुने खानाका परिकार (भिडियो र तस्वीर सहित)
नेपालगन्ज, २७ बैशाख : ‘टिपिकल’ नेपाली खानाका बिषयमा खोज गर्ने चर्चित ‘ब्लग’ द गुन्द्रुक डटकमले नेपालगन्जका नौं बिशेष खानाका परिकारको सूचि तयार गरेको छ । नेपाली स्थानीय खानाका परिकारप्रति रुची राख्ने र अनुसन्धान गर्ने नेपाली र बिदेशीहरुले उक्त ब्लग हेर्ने गरेका छन् । अंग्रेजी भाषाको उक्त ब्लगले नेपालगन्जका खानालाई स्वदेश र बिदेशमा प्रचार प्रसार हुने गरी समाचार प्रकाशन गरेको छ ।
‘नेपालगन्ज पश्चिम नेपालको आर्थिक हव हो’ ब्लगले लेखेको छ,–‘त्यो संगै यो शहर बिधिन्न धम्र,सम्प्रदायको बिबिधतायुक्त शहर पनि हो । जहाँ बिभिन्न स्वादका परिकारहरु खान पाईन्छ ।’ उक्त ब्लगले खानाको पहिलो सूचिमा बिरयानीलाई राखेको छ ।
बिरयानी नेपालगन्जको बिशेष खानेकुरा हो । बाहिरबाट आउने जोकोहीले यसलाई मन पराउँछन् । बिरयानी चामल र मासु मिसाएर पकाइने खानेकुरा हो । यहाँ मुवारक बिरयानी चर्चित छ । रहिम लगायत अन्य धेरै ठाउँमा बिरयानी पाईन्छ । बिरयानी धेरै ठाउँमा पाइने भएपनि पकाउने व्यक्तिको पाककलाका आधारमा त्यसको स्वाद फरक हुन्छ ।
जब तपाईं धम्बोझी चोक र बी.पीमा जानुभयो भने त्यहाँ सेकुवाको स्वाद लिन पाउनुहुनेछ । सेकुवा भन्ने बित्तिकै कस्को मुख नरसाउला र ? साँझपख सेकुवा खान धम्बोझी र बिपीचोकमा भिड नै लाग्छ । सेकुवा, मःम, भुटुवा त्यसमा झ्न अचार कस्लाई मिठो नलाग्ला र ?
पश्चिम तराईमा थारु समुदायको बाक्लो बसोबास छ । यो समुदायमा प्रचलित खानेकुराहरु अहिले सबैले रुचाउन थालेका छन् । सिद्रा माछा, ढिकरी, घोङ्गी, बयरको अचार मन पराउनेहरुका लागि गोचाली खाजा घर एकपटक जानैपर्छ । कारकादोमा रहेको गोचाली खाजाघरमा थारु समुदायमा प्रचलित सबै खानेकुरा पाईन्छ ।
दुधबाट बनेको बिशेष प्रकारको खानेकुरा हो रावडी । त्रिभुवचोकमा तपाई साँझपख जानुभयो भने सडकमै रावडी खान पाउनुहुनेछ । यसको स्वाद बेग्लै पाउनुहुनेछ । रावडी खानकै लागि धेरै मानिसहरु साँझ त्रिभुवनचोक जाने गरेका छन् ।
पानीपुरी, आलु टिकिया
पानीपुरी र आलु टिकिया ? नाम सुन्ने बित्तिकै सबैको मुख रसाउँछ । तर त्यसको स्वाद प्रत्यक्ष लिन चाहानुहुन्छ भने एकपटक त्रिभुवनचोक जान नबिर्सिनुहोला ।
नेपालगन्ज आउँदा खान छुटाउन नहुने परिकार हो हलुवा पराठा । हलुवा र पराठा तपाईले जहाँ पनि देख्नुभएको होला अथवा खानुभएको पनि हुन सक्छ । तर नेपालगन्जको चौलिका चोकमा पाइने हलुवा पराठाको स्वाद सायदै अन्त पाउनुहुनेछ ।
त्रिभुवनचोकमा पुगेपछि चनापुरी खानुको मजा नै बेग्लै हुन्छ । प्राय बिहानपख चना र पुरी ठेलामा बिक्री गरिन्छ ।
नेपालगन्जमा लस्सीको स्वाद नै बेग्लै हुन्छ । यहाँ प्राय ठाउँमा लस्सी पाईन्छ । तर त्रिभुवनचोकको लस्सी बिशेष मानिन्छ ।
नेपालगन्जमा आउने तर पान छुटाउने ? यो असम्भव कुरा हो । कस्तो पान खाने भन्ने निर्णय यहाँले गरे पुग्छ । यहाँ जस्तो पान पनि पाईन्छ ।
सम्पूर्ण तस्वीर र भिडियो : द गुन्द्रुक डटकम
प्रकाशित मितिः शुक्रबार, बैशाख २७, २०७६ 8:04:29 AM